Barnaamijka deeqa Daryeel bixiyaha lmaha ee San Diego | The San Diego Foundation
Barnaamijka deeqa Daryeel bixiyaha lmaha ee San Diego
Si loo taageero bixiyeyaasha xanaanada carruurta ee degmada San Diego oo siiya adeegyo muhiim ah qoysaska deegaanka ah inta lagu guda jiro cudurka faafa ee COVID-19, Degmada San Diego, San Diego Foundation, YMCA ee Degmada San Diego iyo Xiriiryada Horumarinta Caruurta ayaa bilaabay Barnaamijka Deeqa Daryeel Bixiyaasha Ilmaha ee Degmada San Diego.
Waqtiga kama dambaysta ah ee dalabku wuu dhammaaday.
Haddii aad si guul leh u soo gudbisay codsi khadka tooska ah kahor waqtiga kama-dambaysta ah, waa inaad ku heshay emayl xaqiijin ah sanduuqa emaylkaaga markii aad soo gudbiso. Haddii aadan helin e-maylka xaqiijinta ee ku jira sanduuqaaga, fadlan hubi faylkaaga spam.
Maaddaama mugga sarreeya ee waqtiyada codsiyada codsiyada ay ka dheer yihiin sidii la filayay. Haddii aan u baahanno macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dalabkaaga waa nala soo xiriiri doonaa. Haddii aad hesho wax su’aalo ah oo ku saabsan W-9-ka, fadlan la xiriir hay’adda loogu talo galay ee kuu soo dirtay emaylka. Dhammaan deeqaha waxaa lagu shaqeyn doonaa ugu dambayn Nofeembar 30 Waan ku qanacsanahay samirkaaga.
Weydiimaha dheeraadka ah, fadlan email noogu soo dir childcare@sdfoundation.org ama noo dhaaf fariin cod ah oo ku siiya magacaaga ama lambarka shatigaaga.
Ku saabsan Barnaamijka Deeqda Daryeelka Ilmaha
4,ta Ogosto, Gudiga kormeerayaasha degmada San Diego waxay si wada jir ah u codeeyeen in loo qaybiyo $ 25 milyan oo ah falka qarasheynta CARES daryeel xaano bixiyaasha u qalmo ee Deegaanka San Diego.
Si loo qaybiyo lacagaha, Degmadu waxay iskaashi la sameysay Aasaaska San Diego, YMCA ee Degmada San Diego iyo Xiriiryada Horumarinta Caruurta si loo maareeyo dalabka, xaqiijinta iyo hanaanka bixinta deeqda.
Waa maxay Baarnaamijka Deeqda Bixiyaha Daryeelka Caruurtu?
Si loo taageero bixiyayaasha adeegyada daryeelka caruurta ee Gobolka San Diego kuwaaso xilligii safmareenka COVID-19 qoysaska deegaanka siinayay adeegyo muhiima, Waxay Gobolka San Diego, Ururka San Diego, YMCA ga San Diego iyo Dalladda Horumarka Caruurtu daah fureen barnaamij $25 milyan ah oo lagu caawinayo bixiyayaasha adeegyada daryeelka caruurta.
Ayaa u qalma inuu codsado maalgelin?
Si aad ugu qalanto maalgelinta, bixiyayaasha xanaanada cunugga waa in ay buuxiyaan shuruudahan soo socda:
Waa inuu u hoggaansan yahay saamiyada carruurta iyo shaqaalaha ee ay waajibisay Gobolka California (www.cdss.ca.gov/inforesources/community-care-licensing)
Waa inuu ku yaallo xuduuda juquraafi ahaaneed ee Degmada San Diego
Waa waajib in ay ku caddeeyaan codsiga deeqda; in dhammaan lacagaha deeqda ah ee loo qoondeeyay loo isticmaali doono keliya ujeeddooyinka lagu aqoonsaday shuruudaha u qalmidda deeqaha, oo ay ku jiraan taageerada shaqaalaha, sahayda, amaahda/deynta guryaha iyo kaalmada kirada, adkeysiga ganacsiga iyo hagaajinta raasamaalka ee meelaha bannaanka
Waa in uu haysto Shatiga xanaanada caruurta/ilmaha oo sharciyeysan oo ay soo saartey Gobolka California, Shatiga Daryeelka Bulshada, ama uu bixiyo caddeyn ganacsi macluumaad haddii shatiga laga dhaafay
Waa inuu u furnaadaa ganacsiga waqtiga codsiga ama qorshaynaya in la furo 45 maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda codsiga.
Immisa maalgelin ayuu daryeel bixiyuhu heli karaa?
Daryeel bixiyaasha u qalma ayaa codsan kara deeq-lacageed loogu talagalay shaqaalaha, sahayda, deynta/amaahda guryaha iyo kaalmada kirada, adkeysiga ganacsiga iyo hagaajinta raasamaal ee meelaha bannaanka ka ah.
Daryeel bixiyaasha leh xanaanada ee qoyska shatiga weyn (oo shati leh xannaaneynta ugu badnaan 14 carruur/ilmo) ayaa xaq u yeelan doona inay helaan illaa $ 3,500 iyo a daryeel bixiyaasha carruurta/ilmaha ee shatiga qoyska yar (oo shati leh xannaanaynta ugu badnaan 8 carruur/ilmo) waxay xaq u yeelan doonaan illaa $ 2,750.
Qandaraasyada aan dowliga ahayn, xarumaha daryeelka caruurta ee shatiyeysan ayaa xaq u yeelan doona inay helaan ilaa $ 175 halkii ilmo/cunug kasta, taas oo ku saleysan shatiga daryeelka ilmaha. (i.e. CSPP, CCTR, Head Start) ee qeyb ay maal galiso Dowladda oo qandaraas la siisay oo ah xarumaha daryeel caruur ee shatiga leh waxay xaq u yeelan doonaan in ay helaan illaa $ 175 ilmo kasta oo aan lagu kabin la’cag, oo aynan kabadin awoodda shati-ga/rukhsada.
Qandaraasyada aan dowliga ahayn, bixiyeyaasha daryeelka shatiga laga-dhaafka ah, sida xerooyinka maalinta ee xagaaga, barnaamijyada madaddaalada oo ah xeryaha iyo naadiyada dhallinyarada ee bulshada sida Naadiyada Wiilasha & Gabdhaha ee San Di-ego, kuwaas oo u adeega carruurta da’da Iskuulka illaa 12 sano jir ah. Ayaa u qalma in eey helaan illaa $ 100 halkii ilmo/cunug kas-ta.
Xagee bay $25 ka milyan ka imanayaan?
$25 ka milyan waxa la soo dhex mariyay sanduuqa CARES Act ee dawladda dhexe waxaana isla ujeedadan u ogolaaday Guddida Kormeerka Gobolka San Diego.
Halkee baan ka heli karaa macluumaad dheeraada oo barnaamijka ku saabsan?
Dhammaan macluumaadka ku saabsan Barnaamijka Deeqda Bixiyayaasha Daryeelka Caruurta ee Gobolka San Diego waxa laga heli karaa SDFoundation.org/ChildcareGrants.
Macluumaadka ma lagu heli karaa luuqadaha kale?
Haa, marka uu qofku booqdo SDFoundation.org/ChildcareGrants, waxa uu dooran karaa inuu bogga barnaamijka deeqda ku daalacdo luuqadahan soo socda: Carabi, Ingiriisi, Haitian Creole, Ruush, Soomaali, Isbaanish, Tagalog, iyo Fiitnaamiis. Hadii luuqad meesha laga waayo, waxaanu booqdayaasha ku boorinaynaa inay isticmaalaan tuulka Google Translate ee ku yaal dhanka hoose ee bogga.
Waxaan ahay waalid ama xubin qoys u baahan taageero, ma codsan karaa?
Waxaan ahay bixiye daryeel caruureed, ama adeeg bixiye ayaan xiriir lala yeehay, balse ma hubo inaan codsan karo iyo in kale. Yaan la hadli karaa?
Wixii su’aalo ah ee khuseeya u qalmista, codsashada amase barnaamijka deeqda qudhiisa, fadlan iimayl u soo dir childcare@sdfoundation.org kooxdayadaana kugu xidhi doonta qofka ugu habboon ee su’aashaada ka jawaabaya. Dhammaan wixii su’aalo degdega ah, fadlan wac (619) 814-1389.
Waa maxay kharashaadka laga ogol yahay deeqdan?
Bixiyayaasha daryeel caruureedku waxay codsan karaa in laga caawiyo shaqaalaha, alaabooyinka, kirada iyo carbuunaha guryaha, adkaysiga ganacsiga iyo horumarinta raasamaaleed ee meelaha dibadda u baxsan. Adkaysiga ganacsigu waa awoodda uu urur u leeyahay inuu si dhaqso leh ula qabsado qalaalaase yimaada isaga oo sii wada hawlihiisa dhanka ganacsiga iyo ilaalinta dadka, hantida iyo guud ahaan magaca ururka.
Waa maxay barnaamij qandaraas oo dowladdu wax ka maalgeliso?
Waxaa laga wadaa bixiyaha daryeel caruureedka wuxuu u adeegaa ugu yaraan hal canug isagoona wax siiya waalidkiisa isagoona kula jira qandaraas dowladda uguna jira Barnaamijka Xanaanada Caruurta ee Dowlad Deegaanka California(BXCDDC) ama Horumarka Guud ee Daryeelka California( HGC) ama Bilowga Madaxa Fadaraalka.
Goorma ayey bixiyeyaasha daryeelka ilmaha heli doonaan maalgelin?
Lacagaha waxaa loo qaybin doonaa iyada oo loo marayo wareejinta elektiroonigga ah ama jeegga Nofeembar 30, 2020.
Bixiyeyaasha xanaanada carruurta ee leh su’aalo dheeri ah waxay la xiriiri karaan childcare@sdfoundation.org ama (619) 814-1389.
Barnaamijyada dugsiyada degmada ma loo ogol yahay inay codsadaan?
Barnaamijyada dugsiyada degmada ee ay maalgeliso Waaxda Waxbarashadu (DOE) uma qalmaan inay codsadaan Barnaamijka Deeqda Bixiyaha Daryeelka Caruurta. Fadlan muunad codsashada oo dhammaystiran ka eeg websaydka.
Waxaan ka shaqeeyaa Barnaamijka Mushaharka Kale (Alternative Payment Program), ma u qalmaa deeqda?
Haa, waad u qalantaa.
Waxaan qoys/saaxiib/deris la ahay adeeg bixye shatiga laga dhaafay. Ma u qalmaa inaan codsado deeqda?
Maya. Qoyska, saaxiibka ama deriska bixiyayaasha daryeelka caruurta ee laga dhaafay shatiga xaq uma laha deeqdan.
Xarumaha Horumarinta Caruurta Milatarigu ma u qalmaan deeqda?
Xarumaha Horumarinta Caruurta Milatarigu iyo xarumaha daryeelka caruurta ee kharash caawimaad ka hela Milatarigu waa u qalmaan, hadii aanay xarunta ruuxeedu ahayn mid dawladu maalgeliso. Xarumaha Horumarinta Caruurta Milatariga ee ku yaal saldhigyadu uma qalmaan.
Hadii aan taageero lacageed ka helay barnaamij kale oo dawladeed (sida PPP), ama deeq kale ka helay Ururka San Diego, sidoo kale ma codsan karaa deeqdan?
Haa, hadii aad heshay taageero kale oo lacageed waad codsan kartaa deeqdan.
Hadii aan boosto ahaan codsigayga u diro ma la i soo wargelinayaa marka la helo?
Ka warran hadii aanu ku naalno meel ka baxsan Gobolka San Diego?
Deeqdan waxa loo hayaa keliya bixiyayaasha adeegyada daryeelka caruurta ee ku yaal Gobolka San Diego.
Goormay tahay inaan boosto ku diro codsigayga waraaqda ah?
Luuqadeebuu codsiga dhabta ah ku qornaan doonaa? Hadii aan caawimo u baahdo ma helayaa qof igu caawiya luuqadda aan u baahdo?
Codsigu waxa uu ku qoran yahay luuqadahan soo socda ee ku taxan websaytka: Carabi, Ingiriisi, Haitian Creole, Ruush, Soomaali, Isbaanish, Tagalog, iyo Fiitnaamiis.
Waxa taageero taleefan la diyaar ah turjumayaasha luuqadahaas. Si aad taageero turjume u hesho fadlan la xiriir taleefanka 619-814-1389.
Waa maxay noocyada su'aalaha la iga rabo inaan codsiga kaga dhex jawaabo?
Fadlan fiirso linkiga bogga websaytka ku jira kaa soo kuu geyn doona muunadda codsiga si aad u sii eegto.
Maxaan u baahnahay si aan u codsado (deeqda)? Mase u baahana doonaa inaan dukumeentiyo soo geliyo?
Ururada leh Shati Bixiye Daryeel Caruureed Shaqaynaya:
Waxaad u baahan doontaa lambarka Shatiga Daryeelka Caruurta, iyo awoodda shatiyeed (ku qoran Shahaadada Shatiga Daryeelka Caruurta), hadii mashruucaaga qayb ahaan ay maalgeliyaan CSPP, CCTR, ama Head Start, waxa lagaa rabaa inaad sheegto tirada caruurta la kaabo ee hadda ay maalgeliyaan mid kastoo barnaamijyadaas ka mida.
Ururada laga dhaafay shatiga:
Waxaad u baahan doontaa lambarkaaga ganacsi ama Lambarka Aqoonsiga Shaqaalaysiiyaha (EIN) iyo awoodaada diiwaan gelineed ee ugu badan ee maalintii.
Labada nooc ururba midkoodna lagama rabo inuu soo geliyo wax dukumeentiyo ah.
Waa maxay lambar ganacsiyeedka iyo Lambarka Aqoonsiga Shaqaalaysiiyuhu (EIN)?
Lambarkaaga ganacsi waxa bixiya Xoghaynta Gobolka Kalafoorniya siiyana dhammaan Shirkada Kalafoorniya: https://www.sos.ca.gov/business-programs/business-entities/cbs-search-tips/. Lambarkaaga Aqoonsi Shaqaalaysiiye (EIN) waa lambar aqoonsiyeed Revenue Service (IRS) siiso meheradaha ganacsi.
Codsiga deeqda ma ku jiraan su'aalo khuseeya heerka muwaadinimada?
Muwaadinimadu maaha su’aal ku jirta codsiga. U qalmista deeqda waxa go’aaminteeda bud dhig looga dhigay kuwan soo socda:
Waa inuu u hogaansanaadaa saamigalka ilme-shaqaale ee uu waajibiyay gobolka Kalafoorniya.
Waa inuu ku yaal xuduuda juquraafi ee Gobol-hoosaadka San Diego.
Waa inuu isku caddeeya codsiga deeqda dhexdiisa oo sheegaa in dhammaan deeqda la qorsheeyay loo adeegsan doono ujeedooyinka lagu sheegay shuruudaha u qalmista deeqda.
Waa inuu lahaadaa shati daryeel caruureed shaqaynaya (ama uu keena warbixinta macluumaadka ganacsi hadii shatiga laga dhaafay.)
Waa inuu ganacsi shaqaynaya yahay xilliga codsiga la samaynayo ama uu ku furmayaa muddo 45 beri ah oo ka bilaabmaysa codsiga.
Miyaa la iga rabaa caddayn sheegaysa in xaaladdu igu adag tahay?
Maya, caddayntaas xaaladda adag loogama baahna nidaamka codsiga.
Yaan ku qoraa codsiga si loola soo xiriiro?
Hadii aad daryeel caruureed bixiye qoys tahay, waa in macluumaadka xiriirka, magaca koobaad iyo ka danbe, la mid yihiin kuwa ku qoran liisanka daryeelka caruurta. Hadii aad tahay xarun shati leh ama adeeg bixiye shatiga laga dhaafay oo u qalma deeqda ku qor macluumaadka xiriir ee qofka codsiga buuxinaya.
Sidee baa la ii soo ogaysiinayaa heerka codsigaygu marayo?
Dhammaan codsadayaashu waa inay websaydka Care Connect kala socdaan isbeddelada heer ee codsiga (heerku waxa uu ku hoos jiraa badhinka “Resources”). Xaqiijinta aqbalista ama diidista codsiga waxa iyana codsade kaste loogu soo diri doonaa habka iyo ciwaanka boostada ee ku qoran codsiga.
Waxaan ahay bixiye daryeel caruureed kaasoo daryeel siinayay caruur ka badan inta lagu sheegay shatigayga COVID daraadiis. Xaddigan badan ma inaan ku qoro codsigaa?
Xaddiga deeqdu waxay ku salaysnaan doontaa tirada ku qoran shatigaaga oo keliya.
Sidee baa deeqda loo kala qoondaynayaa?
Codsiyadu waa inay buuxiyaan shuruudaha u qalmista. Waxaanu rajaynaynaa inaanu helno codsiyo ka badan lacagta aan hayno, sidaa daraadeed, waxaanu adeeg bixiyayaasha ku boorinaynaa inay sida ugu dhakhsaha badan codsigooda u soo gudbiyaan.
Deeqdan ma inaan dib u soo celiyaa? Cashuur miyaan ka bixinayaa deeqdan?
Lagaama rabo inaad soo celiso deeqdan, maadaama aanay deyn ahayn. Cashuur lagama jarayo deeqdaada ka hor intaan laguu soo dirin, balse deeqda waxa loo sheegaya IRS. Bixiyayaasha Daryeel Caruureedka deeqda la siiyo waxay heli doonaan foom 1099.
Hadii la i siiyo deeqdan, goorma ayay lacagtu i soo gaareysaa?
Lacagta waxa lagu qaybin doon qaab diriseed elegtarooni ah ama jeeg inta ka horraysa 30 ka Noofeembar, 2020.